Muqdisho: Xildhibaanada BF ee haysta dhalashada UK oo safiirkooda la kulmay | Caasimada Online
Home Warar Muqdisho: Xildhibaanada BF ee haysta dhalashada UK oo safiirkooda la kulmay
Muqdisho: Xildhibaanada BF ee haysta dhalashada UK oo safiirkooda la kulmay
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee heysto Dhalashada dalka UK ayaa waxay Magaalada Muqdisho kula kulmeyn safiirkooda u fadhiyo Soomaaliya.
Kulanka labada dhinac oo ka dhacay safaaradda UK ee Muqdisho ayaa waxaa la iskula soo qaaday xaaladda guud ee Soomaaliya, sida ay u wada shaqeyn karaan labada dal iyo waxyaabaha la midka ah.
Safaaradda INgiriiska ee Soomaaliya ayaa intii uu kulanka socday waxaa ay soo bandhigtay habka ay u socdaan kaalmada Dowladda UK ay ku bixiso Soomaaliya.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka Dalalka Ingiriiska iyo Soomaaliya oo ay si wadajir ah uga shaqeynayaan safaaradda UK ee Muqdisho iyo Xildhibaannada heysta dhalashada Ingiriiska eek u jira Baarlamaanka Soomaaliya.
Inta badan Xildhibanada, Wasiirada iyo madaxda ugu sareeyo dalka ayaa heysto dhalasho dalal kale taasoo qeyb ka ah Xisilooni darada siyaasadeed ee ka taagan dalka maadaama ay ka shaqeenayaan danaha dalal kale isla markaasna aysan dan ka laheyn dalka Soomaaliya.